Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (035-2010)
* ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်စာရင်း ထုတ်ပြန်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ မဲပေးခွင့်စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည်ပါဝင်ခြင်းမရှိဟု ရန်ကုန်မှလာသည့် AP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ […]
September 26, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (034-2010)
* ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် နအဖကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ မြဝတီစာပေနှင့် ပုံနှိတ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းမှ မြဝတီသတင်းစာ အပါအဝင် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ ၃စောင်ခန့်ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်အသိုင်းအဝန်းမှဆိုသည်
* ကရင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မထောကုန်းကျေးရွာ အနီးတွင် ကရင်အမျိူးသာ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်ရင်း (၉) နှင့် နအဖစစ် ကွပ်ကဲရေးဌာနချူပ် စကခ (၁၆)မှ ခြေလျင် တပ်ရင်း ခလရ (၂၄၂)တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိသောကြောင့် ဒေသခံရွာသား ၂၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည် […]
September 19, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (032-2010)
* ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP က ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ်တွင်မဲအရေအတွက် သိရှိလိုသဖြင့် ပါတီဝင်များထံမှ ကြိုတင်မဲစာရင်းကောက်ယူမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
September 5, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (031-2010)
* ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်းတော မြို့နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာများကို မက်လုံးပေးစည်းရုံးသည့်အနေဖြင့် ယာယီနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် အဖြူရောင်ကတ်များအား ငွေကျပ် ၂၀၀၀ ဖြင့်ထုတ်ပေးထားသော်လည်းခရီးသွားလာရာ တွင် လွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်း ရိုဟင်ဂျာအရေးလေ့လာသူတစ်ဦးကပြော[…]
August 29, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (030-2010)
* ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP က ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် ဝါးရုံစွန်းရွာတွင် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဒေသခံပြည်သူများအား ငွေချေး၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ကျေးရွာအာဏာပိုင်များက လိုက်လံ ကူညီပေးနေကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်
* အမျိုးသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLDဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့သို့ရောက်ရှိကာ NLD အနေဖြင့် ရှေ့ဆက်၍ ပိုမိုကျစ်လစ်ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသခံအဖွဲ့ချူပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြသည်
August 22, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (029/2010)
* ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း USDA တဖြစ်လဲ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ USDP ၏ သတင်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ပြည်တွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှား သူများကို နှိပ်ကွပ်ရန် အတွက်မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု ဇူလိုင်လအတွင်းက ထိုင်း- မြန်မာ နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့သည့် USDP သတင်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်ခိုင်ဦးကပြောကြာခဲ့ပါသည်[…]
August 15, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (028/2010)
In this week’s report , you will find:
* USDP party members and residents stated that USDP organizers in Yenanchaung Township, Magwe Division, were provided with funds to runamoney lending business asameans to recruit more members.
* ရေနံချောင်းမြို့တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကပါတီစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် စည်းရုံးရေးမှုးများအား ငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အရင်းအနှီးထုတ်ပေးနေသည်ဟု ပါတီဝန်များနှင့်ဒေသခံများက ပြောသည်[…]
August 8, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (027-2010)
* လွန်ခဲ့သော မေလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မင်္ဂလာဈေးဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များသည် ချေးငွေရယူလိုပါက ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) မှချေးငွေချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် (USDP) ပါတီဝင်အဖြစ် ဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဈေးသူဈေးသားများက ပြောသည်။
* ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်က နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကို ယခုအချိန်ထိ မကြေညာသေးခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အတွက် တရားမျှတမှုမရှိရာရောက်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်ဟု သူမ၏ရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်[…]
August 1, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (026-2010)
In this week’s report, you will find:
* News sources from Vietnam revealed that U Nyan Win, the Minister of Foreign Affairs, announced that the military government will allow Daw Aung San Suu Kyi to contest in the elections. U Nyan Win also reaffirmed that the 2008 constitution places no restrictions on Daw Aung San Suu Kyi to participate in the elections.
* ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) သည်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ရန် စည်းရုံးရေး သီချင်းများကို နာမည်ကျော် အဆိုတော်များနှင့်သွင်းယူပြီး စစ်အစိုးရပိုင်ရုပ်သံမီဒီယာများတွင် ထုတ်လွှင့်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်အဆင့် USDP အတွင်းရေးမှုးတစ်ဦးက ပြောသည်။
July 25, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Last week, Burma’s military regime began dividing the assets of the Union Solidarity and Development Association (USDA) from those of its political counterpart, the Union Solidarity and Development Party (USDP), headed by Prime Minister Thein Sein. The USDP has come under fire from critics and opposition parties for its lack of regard for election regulations but the association’s move to separate assets appeared to beatoken step towards transparency. Indeed,asenior military official noted that the “[USDP] will purchase buildings, vehicles and office equipment from the association. They need to do it according to the election law[…]
July 19, 2010 • By Burma Partnership • Tags: Political Parties, Union Solidarity and Development Association, Union Solidarity and Development Party • Read more ➤